Enyemaka ụmụaka, Sugar Calculator Chart Chart> Reddit
Nke mbụ Sugarlove® bụ nke mbụ na ịchọta ihe ịchọta mkpụrụ obi, tupu ịmalite ịmalite ilekwasị anya n'ịhụ ihe onwunwe n'anya. Nke a na-agụnye na ọnweghị oke nwa shuga, nna shuga na shuga mummy Allowance, Gaa na Calculator Chart Guide> Reddit. N'ikwu nke a, nke a bụ otu esi eme ka mkpakọrịta nwoke na nwanyị na nkwenye na-aga ụkwụ na ụkwụ.
Inye ego ego papa gị na-akwụ ma ọ bụ ụgwọ nne na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ gị niile? You chere na ị na-enweta ihe zuru oke site na onye okenye gị, onye ọgaranya ma nwee ezigbo mmekọrịta? Ego bụ isiokwu dị mgbagwoju anya na mgbe ọ bịara ego ole nwa bekee na-akwụ ụgwọ, gaa na Calculator Chart Guide> Reddit kwesịrị ịbụ, enweghị ụkpụrụ ọ bụla. Ọtụtụ ụmụ ọhụrụ shuga na-anwa ikpebi uru ha bara na-adabere n'ọdịdị ahụ ha, afọ, agụmakwụkwọ na ihe ndị ọzọ mana ọ bụghị ya.
Dị ka nwa shuga, otu n'ime nsogbu ndị kachasị njọ bụ ịchọpụta ihe nkwenye nna nna gị ma ọ bụ nkwenye mama mama kwesịrị ịbụ. Babiesmụaka shuga niile nwere mkpali dị iche iche mgbe ha na-achọ ụmụ nwanyị shuga. Mara ihe ịchọrọ site na mbido dị ezigbo mkpa. Ọ ga - eme ka ị ghara inwe afọ ojuju na inwe nghọtahie na - enweghị isi gbasara obere ego shuga, be Gị Calculator Chart Guide> Reddit.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nna shuga nke ego shuga nke ga-ekpuchi mmefu gị niile, a na-eme atụmatụ na ego a na-akwụkarị shuga bụ $ 3000 kwa ọnwa. Iji mara kpọmkwem ihe na-arụ ọrụ maka gị, bido site na ịgbakọ ego ole ị ga-eji bie, mgbe ahụ ị ga - enwe ike ịchọpụta ego ole a na - akwụ ụgwọ shuga na - arụ ọrụ maka gị. Ọ dịkwa mkpa ka ị tụlee atụmanya gị ka shuga momma Allowance, gaa na Calculator Chart Guide> Reddit na-arụ ọrụ maka unu abụọ.
Buru n'uche na ịmebiga ihe ókè mgbe ị na-arịọ maka ego anaghị arụ ọrụ na ọtụtụ ụmụ nwanyị shuga. Rịọ ihe karịrị $ 10,000 kwa ọnwa nwere ike ịmepụta ahụmịhe na-akụda mmụọ. Ikwesighi, izere ịjụ maka ihe ị chọrọ. Debe ego ego nwa gị shuga dị elu karịa ihe ịchọrọ n'ihi na dịka onye ọ bụla nwere mmasị ịzụ ahịa, onye gị na ya nwere ike ịchọ ibelata ego ha na-akwụ maka nna gị shuga ma ọ bụ mama mama Allowance, Gaa na Calculator Chart Guide> Reddit.
N’ụzọ megidere nkwenkwe ọtụtụ mmadụ, ọ bụghị ụmụ nwanyị nile na-a sugarụ shuga na mumies mummy nwere akụ na ụba na-enweghị nsọtụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha dị ka ọgaranya, ha nwere ike ọ gaghị enwe nnukwu ego mmiri maka ego mmachi akpa shuga. Ha nwere ike tinye ego ha na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ibu ọrụ ezinụlọ ndị ọzọ dịka ego ntụkwasị obi maka ụmụ ha.
Mgbe ị na-ekpebi ego ego nna nna ma ọ bụ shuga na-akwụ sugar, ịchọrọ banyere ebe ahụ. Nke a bụ n'ihi na ọnọdụ ahụ nwere ike inyere gị aka ịghọta ego ole a na-akwụkarị obere shuga ị ga-enweta n'aka ndị si na shuga na mummies bi na mpaghara ahụ. Townsfọdụ obodo na obodo enweghị ọtụtụ ndị nwere oke ọgaranya shuga ya na Allowance, gaa na Calculator Chart Guide> Reddit na mpaghara ndị ahụ adịchaghị ala.
Nkwere, Gaa na Ndabere Chart Ntuziaka> Reddit okwu
Nanị bụ ihe ọzọ dị mkpa mgbe ị na-ekpebi ego ole a ga-akwụ ụgwọ ego ụmụaka. Ọ bụrụ na a na-atụ anya na nwa shuga agaghị enwe enyi nwoke ma ọ bụ enyi nwanyị ọzọ, mgbe ahụ ego mmịrị shuga ma ọ bụ nna shuga shuga, Gaa na Calculator Chart Guide> Reddit kwesịrị ọzọ. Nke a bụ n'ihi na nwa shuga ga-enyefe ọtụtụ nnwere onwe ha ka ọ bụrụ oge na kroup na sugar daddies.
Mmefu ndị ọzọ na-abịa na ahụmịhe mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwere shuga na-ekpebi ego ego shuga ị ga-arịọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga njem, ịzụ ahịa uwe ọhụrụ ma soro ndị nwere shuga na-aga nzukọ azụmahịa, mgbe ahụ, a ga-achọkwu ego iji kpata mmefu ndị ahụ. Rịba ama na mmefu ndị a abụghị akụkụ nke ego nna gị shuga ma ọ bụ Allowance mummy, Gaa na Calculator Chart Guide> Reddit. Nna shuga ma ọ bụ mummy kwesịrị ịkwụ ụgwọ dị iche iche maka ihe niile ịchọrọ mgbe ị na-abụ enyi.